PON Uye EOC Vagadziri & Vatengesi | China PON Uye EOC Fekitori
EOC Muranda EB-400/401 EOC Chiteshi: EB-400-B / EB-401-B
Independent EOC chiteshi michina. HomePlug AV / IEEE 1901 tekinoroji, inotora chipu cheQualcomm AR7411 chip, inoshandisa yakaderera frequency bhendi pazasi pe65MHz, uye inoshanda pamwe neEC dzakateedzana EOC michina yekumusoro-yekupedzisira kuti ione kutapurirana kwemasaini eEthernet data mune iyo coaxial yekuparadzira network. Inesarudzo WIFI basa. Zvimiro zvechigadzirwa 1. Hofisi yepakati yakabatana template yekumisikidzwa inoendeswa, uye chishandiso ipulagi uye inotamba. 2.Provide 1 CABLE yakavhenganiswa chiratidzo yekuisa RF chiteshi uye 1 TV chiratidzo chinobuda RF peji ...
34234GDE ndiyo yekupedzisira michina yeakateedzana XPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol. Iyo yakavakirwa pane yakakura uye yakagadzikana uye yakakwira mutengo-inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita XPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 34234GDE inotora MTK MT7603EN uye MT7612EN chirongwa cheWIFI application chinotsigira IEEE802.11b / g / n uye ...
34123GDE 1GE + 3FE + HOTI + CATV + 2.4G WIFI XPON ONU
34123GDE ndiyo yekupedzisira michina yeakateedzana XPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol. Iyo yakavakirwa pane yakakura uye yakagadzikana uye yakakwira mutengo-inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita XPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 34123GDE inotora MTK MT7603EN scheme yeWIFI application inotsigira IEEE802.11b / g / n standard. Izvo zvakare ...
32123GDE 1GE + 1FE + Hari + CATV + 2.4G WIFI XPON ONU
32123GDE ndiyo yekupedzisira michina yeakateedzana XPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol. Iyo yakavakirwa pane yakakura uye yakagadzikana uye yakakwira mutengo-inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita XPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 32123GDE inotora MTK MT7603EN scheme yeWIFI application inotsigira IEEE802.11b / g / n standard.Iyo zvakare p ...
3434GE2 ndiyo midziyo yekupedzisira ye XPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol, iyo yakavakirwa pakukura uye kugadzikana, uye kudhura- inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita XPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 3434GE2 inotsigira WIFI4 (IEEE802.11b / g / n) uye WIFI5 (IEEE802.11ac). Iyo zvakare inopa iyo WEB maneja ...
3413GE 1GE + 3FE + HOTI + 2.4G WIFI XPON ONU
3413GE ndiyo yekupedzisira michina yeakateedzana eXPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol. Iyo yakavakirwa pane yakakura uye yakadzikama uye yakadhura-inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita XPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi yebasa (Qos). 3413GE inotora MTK MT7603EN scheme yeWIFI application inotsigira IEEE802.11b / g / n standard.Iye zvakare provi ...
3412GDE ndiyo yekupedzisira michina yeakateedzana eXPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol. Iyo yakavakirwa pane yakakura uye yakagadzikana uye yakakwira mutengo-inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita XPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 3412GDE inotora MTK MT7603EN scheme yeWIFI application inotsigira IEEE802.11b / g / n standard. Izvo zvakare p ...
3213GE 1GE + 1FE + hari + 2.4G WIFI XPON ONU
3213GE ndiyo yekupedzisira michina yeakateedzana XPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol. Iyo yakavakirwa pane yakakura uye yakagadzikana uye yakakwira mutengo-inoshanda GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita XPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 3213GE inotora MTK MT7603EN chirongwa cheWIFI application chinotsigira IEEE802.11b / g / n standard. Izvo zvakare pro ...
341GE ndiyo yekupedzisira michina yezviteedzana zveGPON zvinoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol, inoenderana neyakakura, yakagadzikana uye yakakwira mutengo-inoshanda. GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita GPON ZTE chipset uye ine yakavimbika yakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 341GE inotora MTK MT7603EN scheme yeWIFI application inotsigira IEEE802.11b / g / n standard. Izvo zvakare provi ...
321GE ndiyo yekupedzisira michina yeakateedzana XPON inoenderana zvizere neITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard uye inosangana nekuchengetedza simba kweG.987.3 protocol, iyo yakavakirwa pane yakakura, yakatsiga uye yakakwira mutengo-inoshanda. GPON tekinoroji iyo inotora yakakwira-kuita GPON ZTE chipset uye ine kuvimbika kwakakwirira, nyore manejimendi, inoshanduka kugadzirisa, robustness, yakanaka mhando sevhisi sevhisi (Qos). 321GE inotora MTK MT7603EN scheme yeWIFI application inotsigira IEEE802.11b / g / n standard. Izvo zvakare prov ...
Nhanganyaya 1. FTTH GPON ONU akateedzana. 2.Compact saizi, hapana mafeni uye hapana ruzha. 3.Mabasa akapfuma nekushanda kuri nyore uye kugadzirisa. Ivo vanotora yakajairwa yakavhurika software uye Hardware dhizaini kuzadzisa izvo zvinodiwa zvekuvimbika, kuchengetedza uye chengetedzo yeanotakura-giredhi michina. Inowanikwa mune dzakasiyana siyana maratidziro uye inoshanda kune FTTH zviitiko. Hunhu 1. Inoenderana neITU-T G.984 GPON yakajairwa. 2.Mepu inochinja pakati peGEM Port neT-CONT. 3. Suppor ...
Chigadzirwa Pfupiso ZJ5610-GL idiki diki inokwana uye inovandudza modhi kaseti GPON OLT, inosangana nezvinodiwa zveITU-T G.984 / G.988 uye zviyero zveChina Telecom / Unicom GPON, ine kugona kukuru kweGPON kugona, inotakura-kirasi kuvimbika uye rakakwana chengetedzo basa. Inogona kugutsa marefu-manyama fiber fiber yekuwana chinodikanwa nekuda kweakanakisa manejimendi manejimendi, kugadzirisa uye kutarisa kugona, kuwanda kwebasa maficha uye inoshanduka network network. ZJ5610-GL inogona kuva ...